iGCSE ထူးခွန်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် American College Test (ACT) Preparation သင်တန်းအခမဲ့ သင်ကြားပေးသွားမည် - Crown Education
American College Test (ACT)နဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနဲ့ အချို့သောအာရှနိုင်ငံတွေက ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေ မေးလေ့ မေးထရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေက ACTဆိုတာဘာလဲ ? ACT Test ဖြေဆိုမှုအပိုင်းမှာ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်လဲ ? ဘယ်သူ တွေ အဓိကထားပြင်ဆင်သင့်လဲ? ACT Test ဖြေဆိုဖို့အတွက် Registration ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ဘယ်မှာဖြေဆိုရမလဲ? စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတွက် အရင်ဆုံး ACT Testအကြောင်းလေးတွေ မျှဝေပေး လိုပါတယ် … ACT Testဆိုတာက အမေရိကန်တက္ကသိုလ်နဲ့ ကောလိပ်တွေရဲ့ ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားတဲ့အခါမျိုးမှာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူအများအပြားဖြေဆိုနေကြတဲ့ Testတစ်ခုဖြစ်ပြီး ACT ရမှတ် ကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရှိတက္ကသိုလ်များသာမက နိုင်ငံပေါင်း (၃၉ )နိုင်ငံရှိ ကျောင်းပေါင်း(၁၅၀)ကျော်မှ အသိအမှတ် ပြုပါတယ်။
ACT စာမေးပွဲမှာ Mathematics, Science, Reading, Writing, English အပိုင်း (၅)ပိုင်းကို ဖြေဆိုကြရတာဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူစေဖို့ Paper- Based မှ Computer-Based ဖြေဆိုမှုပုံစံကို ၂၀၁၈ခုနှစ်မှ စတင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ACTရမှတ်ကောင်းကောင်းရထားတဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေ အနေနဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်နဲ့ ပညာသင်ဆု တွေကို အခြားနိုင်ငံတကာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေထက် ပိုမိုဦးစား ပေး ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါတယ်။
ACT Testကို Rankingမြင့်တက္ကသိုလ်များ၏ဝင်ခွင့်များနှင့် အတူ ပညာသင်ဆုအခွင့်အလမ်းရလိုသူတွေ၊ နိုင်ငံတကာ Grade 11အောင်မြင်ထားသူများအနေဖြင့်အဓိကထား ရွေးချယ်ဖြေဆိုသင့် ပါတယ်။ ACT Testဖြေဆိုလိုသူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ခုတည်းသော Official Test Center ဖြစ်သည့် CROWN Education & Royal Academic Institute တွင် Test Dateအလိုက် လွယ်ကူစွာ စာရင်းပေးသွင်းဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ACT ရမှတ်အလိုက် ထူးချွန် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများကို CROWN Education & Royal Academic Instituteမှ မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သလို ၂၀၁၉ ခုနှစ် April Intake ACT Test မှာ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုမယ့် iGCSE ထူးခွန် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ယခုဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ရက်နေ့မှာ ACT Preparationသင်တန်းကို အခမဲ့ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးဘဲ ACT Test ဖြေဆိုထားတဲ့ ရမှတ်အလိုက် ထူးချွန်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ အတွက် နိုင်ငံတကာပညာသင်ဆုများကိုလည်း ဦးစားပေး အခမဲ့ လျှောက်ထားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို၊ ရုံးချိန်အတွင်း 01-527 838 နှင့် 09- 44 55 66 701~ 702 တို့ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းသွားတက်မယ့် မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားက ကျောင်းသား/သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ CROWN Online Education Fair 2020
May 30, 2020 Phone Letyar News
[CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020, June 6, 7] Registration: bit.ly/crownfair ❑ အထက်တန်းစာမေးပွဲတွေဖြေပြီးကတည်းက ခုလို (၂)လကျော် (၃)လအတွင်းဘယ်မှမသွားရဘဲ Stay Home ကာလကိုဖြတ်သန်းနေရတော့ ကျောင်းသား/သူတွေလည်း ပညာရေးပွဲတွေနဲ့အလှမ်းဝေးနေကြလောက်ရောပေါ့။ . ❑ ဒါကြောင့် မြန်မာကျောင်းသား/သူတွေ၊ သားသမီးတွေအတွက် နိုင်ငံတကာပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေကို စုံစမ်းသိရှိလိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်က မိဘ/အုပ်ထိန်းသူတွေအတွက် အိမ်မှာနေပြီး နိုင်ငံတကာမှာ နောက်ဆုံးရပညာရေးသတင်းအချက်အလက်တွေ၊ ပညာသင်ဆုတွေအကြောင်း တိတိကျကျသိရှိနိုင်ဖို့ CROWN Online Education Fair ...
အိမ်မှာနေရင်း နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ပညာသင်အခွင့်အလမ်းနဲ့ ပညာသင်ဆုတွေကို လေ့လာလျှောက်ထားရယူပါ
May 17, 2020 Phone Letyar Crown Online Education Fair 2020, News
Registration: bit.ly/crownfair [CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020, June 6, 7] . ❒ Covid-19အလွန် ကျန်ရှိတဲ့ (၂၀၂ဝ)ခုနှစ် ကျောင်းဝင်ခွင့်/ (၂၀၂၁)ခုနှစ်အတွက် ယူအက်စ်၊ယူကေ၊ကနေဒါ၊သြစတြေးလျ၊ဆွစ်ဇာလန်၊စင်္ကာပူ၊ထိုင်းနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တွေကို ပြင်ဆင်လျှောက်ထားလိုသူ ကျောင်းသား/သူ၊မိဘ/အုပ်ထိန်းသူတွေအတွက် ဇွန်လ (၆)ရက်နေ့နဲ့ (၇)ရက်နေ့တွေမှာ CROWN Educationကနေ ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020ကို အိမ်မှာနေရင်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ . “CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020”မှာ ...
"ကနေဒါတက္ကသိုလ်အချို့ပြန်ဖွင့်ဖို့ စတင်ပြင်ဆင်လာ" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ [ဖတ်ရန်ကြာမြင့်ချိန် : ၃မိနစ်] . ❑ Covid-19 ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကို ကမ္ဘာအနှံ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခုလိုအချိန်မှာ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေ စိတ်ဝင်တစားသွားရောက်ပညာသင်ယူမှုများပြားလျက်ရှိတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံအပေါ်မှာလဲ သက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ မိမိအနာဂတ်ပညာရေးအိပ်မက်တည်နေရာကို ကနေဒါနိုင်ငံအဖြစ်ပုံဖော်ထားတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ မိမိအိပ်မက်တွေကို မရပ်တန့်လိုက်ပါနဲ့နော်။ . 🌎 ကမ္ဘာကြီးနေပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါ မိမိအိပ်မက်တွေကို အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ အခုကစပြီး ပြင်ဆင်ထားရအောင်ပါ။ . ❑ အခုဆိုရင် ကနေဒါရဲ့ ပညာရေးပြည်နယ်လို့ ...